UFeliksi Silla - 'Umzala ka-Addams' uCousin Itt no 'Howard the Duck' Sebeshonile eneminyaka engama-84
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UFeliksi Silla - 'Umzala ka-Addams' uCousin Itt no 'Howard the Duck' Sebeshonile eneminyaka engama-84
by UTrey Hilburn III April 18, 2021
ebhalwe ngu UTrey Hilburn III April 18, 2021
Umlingisi uFelix Silla udlule emhlabeni eneminyaka engama-84. Lo mlingisi ubesemuva kwegama elikhulu kakhulu le-TV kanjalo nezindima ezinkulu zefilimu ebeziqala phansi ngaleso sikhathi. USilla udlule kumdlavuza wepancreatic eLas Vegas.
USilla wadlala othandekayo I-Addams Family UCousin Itt uhlamvu obelwenziwe ngokuphelele ngaphandle kwezinwele ezinde futhi ligqoke nezibuko zelanga ezinhle kakhulu nesigqoko sokubhowula. Umlingisi ubuye wadlala indima ebabazekayo kaTwiki kusuka Buck Rogers. UTwiki wayengumngane omncane kaRogers futhi waphinde waklanywa ngemfashini eyakhelwe ngaphakathi. USilla naye ungene Star Wars: Ukubuya kweJedi njengokundiza kwesandla u-Ewok. Njengokungathi konke lokho kwakungekona ngokwanele, waphinde wadlala neLitvak isikhohlakali esingalibaleki kusuka Inyoni Emnyama the IMalcon yaseMalta ngokulandelana.
USilla uqale umsebenzi wakhe kwi-showbiz ne-Barnum ne-Bailey circus futhi wasebenza esishayweni ngaphambi kokuya emsebenzini we-stuntman. Leyo misebenzi yamfaka ezindimeni ezisebenza ngokuphelele kufaka phakathi i-Indiana Jones neThempeli Lokubhujiswa, I-Planet yama-Apes, Poltergeist, I-Batman ibuyisela, Umntwana Wegolide futhi eziningi, eziningi kakhulu.
Umlingisi onyawo olungu-4, 70 amakhilogremu ashiye ngemuva ifa elikhulu kakhulu elenziwe ngezihloko ezikhumbuleka ngokukhethekile.
USilla ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, uSue nezingane ezimbili.
Le Bar Enetimu Enendawo enhle kuyindawo okuzofanele siyivakashele ngolunye usuku. Funda kabanzi ngakho lapha.
Isithombe nguKori Hazel.
Umndeni wakwa-AdamsBuck RogersUmzala IttEwokUFeliksi SillaHoward DuckPoltergeist
Le Bar Enetimu Enethusayo Iphaka Ama-Cocktails Akhethekile kanye nokuhlolwa Okuthusayo
I-Northern Gothic Thriller 'Igumbi le-Oak' Lithola Ukusatshalaliswa